Ataovy Google Fotsiny? Tsy Ao Shina Anefa Satria Mbola Mikatona Ny Google Ao · Global Voices teny Malagasy
Ataovy Google Fotsiny? Tsy Ao Shina Anefa Satria Mbola Mikatona Ny Google Ao
Voadika ny 23 Jona 2014 5:18 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 日本語, русский, English
Vorona eo ankavia: Te-hiala ato aho. Vorona eo ankavanana: Mampalahelo ianareo ny namana. Nahazo sakafo sy rano isika eto. Setrin'ny fihetsiky ny mpiserasera Shinoa tamin'ny fanakatonana ny Google ny sary. Sary avy amin'i Kgen Bao tao amin'ny Twitter.
Efa hiditra amin'ny herinandro fahatelo ny ny fanakatonana ny Google ao Shina, ary misy ireo mahita mialoha fa mety haharitra fotoana lavalava kokoa izany.
Karoka Google, Gmail sy raharaha hafa ao amin'ny aterineto goavana no nanjary tsy azo nidirana nanomboka tamin'ny 30 mey alohan'ny tsingerintaonan'ny vono olona tao amin'ny kianjan'i Tienanmen tamin'ny 4 Jiona 1989, raha nanafika ireo mpanao fihetsiketsehana tsy mitam-piadiana mpanohana ny demaokrasia tao Beijing ireo tafika Shinoa, izay namono olona teo amin'ny an-jatony vitsivitsy teo. Nanara-maso akaiky ireo mpanivana ao amin'ny firenena – ary nampiasa fepetra henjana – mikasika izay adihevitra momba izany.
Nanamafy ny Google fa tsy fahadisoana avy aminy ny fanakatonana, na koa hoe nisy olana ara-teknika avy aminy. Namindra ny seraserany tao Hong Kong nankao amin'i Shina Tanibe ny orinasa tamin'ny taona 2010 rehefa nandà tsy hanohy ny fanivanana atao amin'ny voka-pikarohana.
Nanao izay ho afany ireo mpiserasera Shinoa mba hidifiana amin'ny fanakatonana. Miha-maro ireo olona mampiasa ny tambajotra virtoaly mahaleotena (VPN) mba hidirana ao amin'ny Google avy ao amin'ny Tanibe. Safidy iray hafa malaza ihany koa ny fitaratry ny habaka Google, izay nanampy soratra hoe, “Raha tsy misy ny tolona, tsy misy ny fahalalahana,” ao amin'ny fangon'ny Google. Manao antso amin'ireo mpiserasera ny habaka mba hanao hetsika ao amin'ny Sina Weibo (misy itovizana amin'ny Twitter) sy ny fampiharana fandefasan-kavatra amin'ny finday, WeChat:
Nanakatona ny tolotra rehetra avy amin'ny Google ny GFW (Aroafo goavana), anisan'izany ny loharanom-baovao lehibe momba ny siansa sy ny fikarohana akademika. Raha mihevitra ianao fa tsy azo ekena izany, avereno alefa ao amin'ny Weibo sy WeChat izany hafatra izany. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2013, taorian'ny fanakatonan'ny GFW ny Github [tolotra mpampiantrano], marobe ireo mpandrafitra fandaharan'asa (programmeur) nitaraina tao amin'ny Weibo, ka niala an-daharana ihany ny GFW nony farany ary nanokatra izany indray. Raha tsy misy ny tolona, tsy misy ny fahalalahana. Avereno alefaso izany hafatra izany azafady ary tereo ny GFW.
Araka ny volazan'ny habaka, manana mpitsidika maherin'ny 100 000 isan'andro izy. Ao amin'ny FreeWeibo.com, habaka mamela ny fampiasana kaonty Weibo,niharan'ny sivana tao amin'ny Sina Weibo, voambolana niara-nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fanakanana ny «Google» sy ny «Raha tsy misy ny tolona, tsy misy ny fahafahana».
Nilaza tamin'ny gazety Global Times tamin'ny alalan'ny mailaka ny iray tamin'ireo mpanorina ny GreatFire.org (mpanaramaso ny sivana) fa ny fanakatonana ny tolotra Google rehetra no naharitra indrindra teo amin'ny tantaran'ny aterineto ao amin'ny Shina Tanibe:
Tena ilain'ireo olona mampiasa ny indostrian'ny teknolojia avo lenta ireo vokatra Google, indrindra indrindra fa hoan'ireo mpandrafitra fandaharan'asa (programmeur). Mety hoe tsy eo noho eo ny voka-dratsin'izany, fa maharitra fotoana ela, ho taraiky ny sehatry ny teknolojia Shinoa raha mbola maharitra ela ny fanakatonana.
Sahiran-tsaina indrindra noho ny tsy fahafahana mampiasa ny “Google Scholar”, milina fikarohana momba ny lahatsoratra akademika ireo mpampianatra eny amin'ny oniversite. Mpisera Weibo, “Chen Shixu,” nanoratra hoe:
Diso fanantenana tanteraka tamin'ny fanapaha-kevitry ny governemanta nanakatona ny tolotra Google rehetra aho, matetika aho mampiasa Google mba hikaroka tahirin-kevitra, ka ny fanakatonana ny Google dia midika fanapahana ny fifandraisan'ireo matihanina ao Shina amin'izao tontolo izao.
Voafafa avy eo ny lahatsorany saingy azo jerena ao amin'ny FreeWeibo.com ihany.
Nilaza kosa i Zhan Jiang, mpampianatra fa nisy fiantraikany tamin'ny fahafahany mitroka ireo loharanom-baovao momba ny fampianarana ny fanakatonana. Nilaza ny ahiahiny ny mety hitohizan'ny fanakatonana mandra-pivaha ny disadisa eo amin'i Etazonia sy Shina mikasika ny heloka antserasera izany.
Saingy tsy olana hoan'ireo mpampianatra ambony ihany izany, araka ny fanazavana nataon'ilay mpisera Weibo “Wang Ran” hoe:
Miantraika any amin'ny tombotsoan'ny vahoaka Shinoa aloha voalohany indrindra ny fanakatonana ny Google